धन कमाउन बिदेशजाने सोचमा हुनहुन्छ ? पैसा कमाउन विदेशिनु पर्दैन, पढ्नुहोस एउटा सत्य घटना « Light Nepal
धन कमाउन बिदेशजाने सोचमा हुनहुन्छ ? पैसा कमाउन विदेशिनु पर्दैन, पढ्नुहोस एउटा सत्य घटना
यसैगरी युवा पहिचान पुरस्कार विभिन्न विधातर्फ ३० जनालाई प्रदान गरिएको छ । रासस
इन्टरभ्युमै शिल्पाले नायक पुष्प माथी हातपात गरेपछि…(हेर्नुहोस् भिडियो)
६ गते पक्राउ गरिएका मनोज पुनको नाटकीय इन्काउन्टर, इन्काउन्टरकै लागि पक्राउ घटना गुपचुप ! Exclusive_Video (सहित)
पत्रकार पाण्डेको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी
डा. केसीको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा जन्ममिति कसरी फरक ?
सहलगानीका तीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न
जडीबुटी संकलनमा प्रतिबन्ध
लालबाबु पण्डितले वातावरण जोगाउन गरे यस्तो पहिलो निर्णय
तरकारी बिक्री गर्न बजार नपाउँदा किसानलाई बजारको समस्या
केटाकेटीले चुरोट सल्काउँदा घर जलेर खरानी बन्यो, घरधनी महिला गम्भीर घाइते भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं पठाउने तयारी हुँदैं
संचालक : कुश्माखर बस्याल
कार्यकारी सम्पादक : श्रृजना आचार्य
सहायक-सम्पादक : रिना शाह
उत्पादक/प्रस्तोता : रुपनी जिएम
क्यामेरापर्सन/रिपोर्टर : पुनम हमाल
संवाददाता (खप्तडी) : दिनेश खड्का
ग्राफिक्स डिजाइनर : विजय बस्याल
ठेगाना : आलोकनगर, काठमाडौं
दर्ता न: : 81/073/074
विज्ञापनको लागि : 9851246220, 9860975774
© 2016 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.